मोडेल निशा घिमिरे हाँस्न थालिन्, मोटाएकी पनि छिन् ! दिदीले के के भनिन् (भिडियो हेर्नुस) – Taja Khawar
मोडेल निशा घिमिरे हाँस्न थालिन्, मोटाएकी पनि छिन् ! दिदीले के के भनिन् (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २२, २०७८ समय: ९:४३:५५
एकातिर आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र अर्कोतिर कोरोना संक्रमण बढ्नु, उनको परिवारले उनलाई घरमै ल्यायो । अर्धचेत अवस्थामा घरमै रहेकी निशाको शरीर सुक्दै गएको थियो । उनै, निशाको सामाजिक संजालमा तस्वीहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको थियो ।
नर्भिक अस्पतालकी प्रवन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले उनको उद्दारमा पहल गरेकी थिईन् । निशाको नशामा समस्या देखिएको डाक्टरहरुले बताएका छन् । उनको अवस्थामा धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । निशाले एक भोजपुरी चलचित्र, केही नेपाली सिरियल र म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् ।
Last Updated on: July 6th, 2021 at 9:43 am